Wasaaradda Waxbarashada Puntland Oo Bilowday Qorista Buugaagta Dugsiyada Sare - Bulsho News
Wasaaradda Waxbarashada Puntland Oo Bilowday Qorista Buugaagta Dugsiyada Sare
Ku-simaha Madaxweynaha Ahna Madaxweyne Ku-xigeenka dowldda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa maanta daah-furay qorista Buugaagta Dugsiyada Sare ee dowladda Puntand.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku bogaadiyey Wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare shaqada wanaagsan ee ay ka qabatay kor uqaadida tayada waxbarashada iyo diyaarinta qorista buugaagta dugsiyada sare ee Puntland.
Munaasabadda daahfurka waxaa ka qayblay Wasiirka iyo wasiiru dowlaha wasaarada waxbarashada iyo Tacliinta sare, maamulayaasha iskuulada, macallimiin, masuuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarshada iyo marti sharaf kale.
Fiqi oo shacabka Galmudug ugu baaqay inay AlShabaabka...
Sawirro: Shirkadda Somtel oo toddobaadkii 10-aad abaal-marisay 1000...
Wirtz shows his magic but Haaland and Dortmund...
The Joy of Six: Leeds United v Liverpool...
Turkiga awooddiisa ciidan wax ka ogow!
Yaa loo soo qabtay dilka xildhibaan Cardoofe?
School pays tribute to Derbyshire pupils killed during...
Xoghayaha Guud ee QM oo soodhaweeyay Go’aankii dib...